लुनकरणदास–गंगादेवी चौधरी साहित्य कला मन्दिरद्वारा स्रष्टा सम्मानित - Meronews
मेरोन्यूज २०७९ वैशाख २७ गते १८:२३
काठमाडौँ । लुनकरणदास–गंगादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिरले तीन स्रष्टालाई सम्मान गरेको छ । साहित्यकला मन्दिर स्थापनाको २८ औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा मंगलबार काठमाडौँको अग्रवाल सेवा केन्द्र भवनमा आयोजित समारोहमा स्रष्टालाई सम्मान गरिएको हो ।
समारोहमा प्रा.डा. उषा ठाकूर र साहित्यकला मन्दिरका अध्यक्ष बसन्त चौधरीले संयुक्त रुपमा स्रष्टाहरूलाई नगद जनही एक लाख ५१ हजार, सम्मान पत्रसहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए । साहित्यकला मन्दिरले स्थापनाको वर्षदेखि नै विभिन्न विधाका स्रष्टालाई सम्मान गर्दै आएको छ ।
स्रष्टा सम्मान समारोहमा सम्मानित भएका स्रष्टा प्रा.डा. मानन्धरले साहित्यकला मन्दिरले लामो समयदेखि सह्रानीय काम गरिरहेको र यही कामले साहित्यको क्षेत्रमा विशिष्ट स्थान बनाइसकेको बताए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बसन्त चौधरी फाउण्डेसनका उपाध्यक्ष मेघा चौधरीले अग्रजलाई आदर र नयाँलाई प्रोत्साहन गर्ने आफूहरुको परिवारको परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा साहित्य कला क्षेत्रको उन्नयनमा अनवरत लागिरहने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
साहित्यकला मन्दिरका उपाध्यक्ष वरिष्ठ कलाकार हरिहर शर्माले आफूहरुले सम्मानका लागि मूर्धन्य व्यक्तिको छनौट गर्ने गरेको र यसले सम्मानकै गरिमा बढिरहेको उल्लेख गरे । समारोहमा डा. अस्मिता अर्यालद्वारा रचित पुस्तक ‘मैले बुझेको दुनियाँ’को लोकार्पणसमेत गरिएको थियो ।